Maherifo mihoatra ny 100 no miandry anao amin'ny Age of Empires: World Domination | Androidsis
Age of Empires: World Domination dia aseho ho RTS miaraka maodely Freemium
Microsoft Studios dia nanangana an'ity saga malaza malaza ity toy ny Age of Empires izay nametraka antsika talohan'ny toe-javatra mifehy ny firenena malaza indrindra taloha. Nanomboka tamin'ny vanim-potoana vato ka hatramin'ny vanim-potoana vy dia nisafidy ny mpilalao misafidy amin'ireo sivilizasiona roa ambin'ny folo, ny tsirairay amin'izy ireo miaraka amin'ny tarika manokana mamela azy hanana andian-toetra izay tokony ho fantatsika ny fomba hanararaotana mba handresena ny fahavalo. Anisan'ireo sivilizasiona ireo ny Grika, Egyptianina, Sumerian ary ny maro hafa izay namela anay hanararaotra tsara an'ity lalao video paikady fotoana tena izy ity izay iray amin'ireo angano amin'ity sokajy lalao ity.
Ankehitriny niverina niverina indray izy tamin'ny fisehoana tampoka tamin'ity herinandro ity niaraka tamin'ny Age of Empires: World Domination. Iray izay miloka amin'io tetikady io amin'ny fotoana tena izy ary mamela antsika tariho ny miaramila alohan'ny fahavalo tahaka ny azontsika atao amin'ny lalao hafa an'ny orinasa Starcraft ary ireo sokajy izay tsy azontsika amin'ny telefaona Android. Na dia navoaka isam-paritra aza izy dia tsara vintana ny miditra amin'ny APK misy azy hanamarinana ny toerana misy azy raha toa ka mifanitsy amin'izay natsangan'ireo fanitarana sy kinova tranonkala vao tsy ela akory izay, ary avy amin'ny toa inona, azontsika atao ny milaza fa ity dia lalao paikady tena izy.
1 Modely Freemium ho an'ny Age of Empires
2 Fikarohana ny sari-tany
3 Amin'ny lafiny teknika
Modely Freemium ho an'ny Age of Empires
Ny mety hampalahelo antsika dia ilay maodely freemium ho an'ny lalao video izay miloka atolory ny atiny rehetra ho vola tokana. Amin'ny fotoana hafa isika ary eto dia nanapa-kevitra momba ny maodelim-freemium, midika izany fa afaka miditra amin'ny fisintomana maimaimpoana ianao, saingy misy ny micropayments hahafahana miditra amin'ny fahefana sy ireo fanampiny hafa izay mahazatra antsika. Ny tsy azonay dia ny habetsaky ny fandoavam-bola tsy voalaza ao amin'ny tranokalan'ny lalao ao amin'ny Google Play.
Microsoft dia nanambara roa taona lasa izay fa hitondra ny franchise amin'ny finday. Herintaona lasa izay dia niverina nanambara mialoha izy fa KLab Global dia niasa tao amin'ny AoE: World Domination ho an'ny sehatra telo: Android, iOS ary Windows Phone.
Andro vitsy lasa izay Age of Empires: World Domination dia natomboka tamin'ny Android sy iOS, na dia tsy nasiana resaka momba ny kinova Windows Phone aza. Ity kinova ho an'ny fitaovana finday ity dia misy ady an-tserasera ary ahafahantsika mamorona fanjakana indray amin'ny alàlan'ny fandrosoana amin'ny teknolojia. Tsy nisy izany raha tsy izany ary afaka manao izany isika mahazo mahery fo malaza 100 Anisan'izany i Joan of Arc, King Arthur, Cao Cao, ary maro hafa.
Fikarohana ny sari-tany
Iray amin'ireo antsipiriany tsara indrindra nananan'ny voalohany, toy ny an'ny RTS avo lenta hafa koa mijery ny sari-tany hikarohana ny fahavalo. Ao AoE: World of Domination, ny mpilalao dia afaka miara-miasa amin'ny maherifo hamorona tafika tokana ahafahan'izy ireo mifanandrina amin'ireo tafika mpiady tsara indrindra.
Ny lalao dia manolotra fanaingoana be dia be momba ny fanaraha-maso ny fanjakana am-pelatanantsika tahaka ny misy azy ireo mamorona ny rafitra ilaina amin'ireo sivilizasiona manan-tantara indrindra. Midika izany fa tsy maintsy mivoatra ireo fandrosoana ara-teknolojia izay mitarika antsika hanana fahefana lehibe indrindra hiatrehana ireo fahavalo izay ho hita eo amin'ny sarintany iray ihany. Tsy mahatratra ambaratonga mitovy amin'ny sivilizasiôna izy io, fa ankasitrahana fa tsy nanadino an'io toerana io izy ireo, indrindra fa amin'ity vanim-potoana Age of Empires ity.
Azo ampitahaina amin'ny Clash of Clans, fa ny ady amin'ny fotoana tena izy mitarika ny tafika mihitsy no mampiavaka azy betsaka. Ka raha mitady lalao video hafa ianao izay mitondra anao any amin'ny toeran-kafa raha ny paikady, manakaiky ny tena RTS, angamba ny fotoana manipy lalao sasany amin'ny Age of Empires: World Domination.
AoE: World Domination fijery klasika tsara tarehy eo amin'ny interface interface ary manana ny zava-drehetra hanjary fahombiazana lehibe. Azontsika atao angamba ny manome tsiny fa ny interface dia misy ankehitriny kokoa noho ny inona no manjaka, satria manana fomba mahazatra loatra izy io, izay mavesatra ao aminy.
Raha tsy izany manana famaranana tsara amin'ny singa teknika rehetra tsy misy zavatra miavaka ambonin'ny ambiny. Ny teboka malemy dia ny fananana ity saga ity amin'ity maodely freemium ity, izay afaka mamerina ireo mpilalao efa nahafaly azy ireo tany am-boalohany tamin'ny taona 90.
algo mifanohitra amin'ny lohahevitra fa miresaka paikady, amin'ny fiarovana artifisialy.
Age of Empires: Fanjakazakan'izao tontolo izao
Avereno ny vanim-potoanan'ny fanjakana
RTS amin'ny Android
Atolory amin'ny maodely Freemium ity saga ity
Fandraisana mahazatra izay tsy tianao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Age of Empires: World Domination dia aseho ho RTS miaraka maodely Freemium
Ary ny apk ho fisintomana?
Ary ny rohy hampidinana ny apk aiza no ahitanao azy? MISAOTRA
Dumengo Top dia hoy izy:
tsy mifanaraka amin'ny fitaovana misy ahy io !! hehehe LG g2 sy NExus9
Mamaly an'i Dumengo Top
Rodrigo Fiadanana fahatelo dia hoy izy:
Tsy misy eto amin'ny fireneko. ... tsara ve misy olona manana ny apk ao anaty mpizara hampiala azy?
Tsy rariny raha afaka miditra amin'ny lalao isika ary hanana tombony ireo mpilalao hafa
Valiny tamin'i Obeda
Ary ny apk maninona tsy hitako eto
Krloz VA dia hoy izy:
Sarotra amiko ny hanaisotra ny lefitry ny Age of the empies Castle Siege
Valiny amin'i Krloz VA
Yeison dia hoy izy:
Salama ary nanandrana fomba maro aho hampidinana ilay lalao fa tsy azo atao, tsara raha nametraka izany faran'izay haingana ho an'ny firenen-kafa ny mpamorona ny taonan'ny empira satria satria hoy izy ireo rehefa handeha hilalao dia tsy hanao manana tombony lehibe ary izahay no ho lasibatra mora vonoina indrindra ka izany no antony nilalaovako tamin'ny lalao stratejika mahery vaika dia ny firenena aziatika niandry ny fahatongavan'ny lalao tsy ho ela ny firenena sisa hahitana hoe firenena iza no manana paikady bebe kokoa
Valiny tamin'i Yeison
Firenena iza no navotsotra?
Lehilahy antitra manana sarontava majika no miandry anao eo amin'ity sehatra lehibe antsoina hoe The Beggar's Ride ity
Hugo Barra dia miresaka momba ny drafitra iraisam-pirenena an'i Xiaomi